Jwxo-shiil oo Firimbi u Afuufaya Caws iyo Biyo ku Noosha Kenya – Rasaasa News
Feb 9, 2011 ethiopia, Jwxo-shiil, Jwxo-shiil oo Firimbi u Afuufaya Caws iyo Biyo ku Noosha Kenya, Ogaden, ONLF, somalia
Janan Jwxo-shiil, oo ay dadweynaha ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya ay Jaanta ka wadheen, kolkay ogaadeen in uusan ku jirin wax dan u ah dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Jwxo-shiil, oo laga shaqaaleeyey [pics 4/7 kenya] wardoonka dalka Eritrea ayaa firimbi u afuufaya caws iyo biyo ku noosha dalka Kenya.
Waxayse su,aasha isweydiinta mudan tahay tolow xagee ayey caws iyo biyo ku nooshu u dididoontaa ma gabalka Ogaden mise dalka Somaliya oo ugu ood xiga.
Jwxo-shiil, ayaa kuwa dhagaha la,a ee wali daba socda bishii December ugu baaqay in ay shir been ah u yimaadaan dalka Eritrea. Xiligaas oo ay Dhagoolahayaasha qaarkood wax maqleen, kuwaas oo kolkii ay shirka isugu yimaadeen soo jeediyey waxba ma hayno oo dadkii wuu inaga jeedsaday ee aan nidaamka badalo.
Sarkaalka wakiilka uga ah xukuumada Eritrea kooxda Jwxo-shiil, ayaa si cad waxaa uu ugu sheegay 16 ruux oo kulankaas yimid “waanu la soconaa xaalada ay marayso kooxdiinu iyo sida ay dadkiinii idiinka jeedsadeen. waxaa kale oo aan ognahay in cid kasta oo Jananka lagu badalo in ay xaalada uga sii darayso.”
“Sidaas daraadeed ma jiraan wax isbadal ah oo aad samayn kartaan, haatan wixii ka dambeeyana ogaadaa Jananku anaga ayuu noo shaqeeyaa, isaga oo wata magac ONLF, si uu ugu nabad galo kolka uu wardoon dibadaha noogu aado.” kooxda ayaa noqotay Habartii tidhi “shiba tidhi habartii afka lagu dhufta.”
Jwxo-shiil, waa Janan ku dhex gaboobay sirdoon iyo munaafaqada, dadka dhexdiisa ah, inta ay nafta xunta ah ku jirto ee ay Eritrea shilimada siinayso waayi mahayo dad uu khaldo.
Jwxo-shiil, waxaa uu baryahan bilaabay in uu abuuro ku rido dadka ay Somalidu aadka ugu taqaan magaca SUJUU.
Erayga SUJUUGA, ayey somalidu ugu yeedhaa dadka asalkoodu Somalida yahay ee degan degaanka Somalida Kenya [DSK], koley sharxi maayo micnaha erayga SUJUU, laakiin ma aha mid fiican.
Deganka Somalida Kenya, ama aadka loogu yaqaan [NFD], waxaa uu ka mid yahay dhulka ay dadka Somalidu leeyihiin ee sida khaldan ay dawlada Ingriisku ugu wareejisay Kenya, sida gabalka Ogaden.
Degaanka NFD, waxaa weeyey meelaha ugu nabadgaliyada badan Geeska Afrika, waxaana ugu wacan dadka degan NFD, oo xarago iyo faan dantooda ka raacday.
Hadaba, waxaa wax lala yaabo ah in qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda gabalka NFD, oo toodiiba hanan waayey in ay Jwxo-shiil, u noqdaan geesiyaal mujaahidiin ah. Waxay dadka SUJUUGA ahi saxaafada ka caayaan masuuliyiinta degaanka Somalida Itobiya iyo masuuliyiinta dawlada federalka ah ee Itobiya, meesha ayna kalmad xun ku odhan karin masuuliyiinta Kenya ee xukunta degaanada ay u dhasheen.
Waxaa dadka SUJUUGA ah, horsocda makas tiro yar, oo ah gabadh ama will uu Jwxo-shiil, si qaraabonimo ah dhagta wax ugu sheego, inta ay ka daalayaana wuu ku shaqystaa, si uu Baago u helo.
Hadii ay dadka SUJUUGU, sii wadaan in ay ka huriyaan colaad dhulka ayna u dhalan ee Somalida Ogadeeniya, waxay ficilo cadho ah galin karaan dadka walaalahood ah ee u dhashay degaanka Somalida Itobiya oo jecel in dalkooda ay nabada ka dhacday caga dhigato.
Maroodigu takarta saaran ma arko ee ka kale takarta saaran ayuu arkaa, weeye arinta SUJUUGU.
Kornayl Wata Ciidamo Badan oo Aad u Hubaysan, Ayaa ka Baxsaday Mamul Gabaleedka Waqooyi Galbeed ee Somaliya [Somaliland]